Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jamaica News Breaking » Expedia waxay u aragtaa Koboc cajiib ah Jamaica
Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Hoteelada & Dalxiisyada • Jamaica News Breaking • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka
Kulankii Jamaica iyo Expedia
Madaxda sare ee shirkadda Expedia Inc., oo ah wakaaladda socdaalka ugu weyn ee internetka ee adduunka iyo soosaaraha ugu weyn ee ganacsiga dalxiiska ee Jamaica, ayaa u xaqiijiyay Wasiirka Dalxiiska, Hon. Edmund Bartlett, iyo saraakiil kale oo sarsare in “xogtoodu ay si cad u muujineyso habeenka qolka qosolka leh iyo koritaanka rakaabka iyadoo labada mitir ay isku mar dhaafeen 2019.” Waxay sidoo kale xuseen in Mareykanka Ameerika uu weli yahay suuqa ugu sarreeya ee raadinta Jamaica.
Soo -bandhigga falanqaynta xogta qarsoodiga ah ee qarsoodiga ah ayaa lagu qabtay xafiiska shirkadda Expedia Inc. ee Miami, Florida, shalay, Isniin, Sebtember 27, 2021.
In kasta oo ay jiraan walaacyo la xiriira COVID-19, kalsoonida daneeyayaasha muhiimka ah ee dalxiiska ee Mareykanka ee kobaca Jamaica ayaa aad u xoog badan.
Jamaica waxay sii wadaysaa xoojinta nabadgelyada Waddooyinka Adkeysiga leh.
Warka soo-dhaweynta ayaa imanaya in kasta oo ay gaabis tahay baahida safarka adduunka oo ay sababtay faafitaanka kala duwanaanshaha Delta ee COVID-19 iyo arrimaha la xiriira. Dib -u -dhaca ayaa saamayn taban ku yeeshay Waaxda dalxiiska ee Jamaica, si kastaba ha ahaatee, waxaa jira kalsooni isa soo taraysa oo ah in xaaladdu mar dhow si wanaagsan isu rogi doonto.
Bartlett wuxuu xusey: “Illaa iyo hadaladii aan la yeelanay daneeyayaasha muhiimka ah ee dalxiiska ee Mareykanka waxay ahaayeen kuwa wanaagsan. Waxaa jira walaacyo la xiriira COVID-19, si kastaba ha ahaatee, kalsoonida koritaanka Jamaica weli waa mid aad u xoog badan. Waxaan sii wadi doonnaa inaan waxba u dhaafno fursad oo aan xoojinno amniga Waddooyinka Adkeysiga leh, hagaajintayada iyo heerka ka sarreeya celceliska tallaallada COVID-19 ee dhammaan waaxda dalxiiska iyo xaqiiqda fudud ee ah in Jamaica ay tahay meesha ugu wanaagsan ee loo aado fasaxa Kariibiyaanka. ”
Soo bandhigida falanqaynta xogta qarsoodiga ah oo si weyn qarsoodi ah ayaa lagu qabtay xafiiska shirkadda Expedia Inc. ee Miami, Florida Isniintii, Sebtembar 27, 2021. Bartlett waxaa ku soo biiray Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Jamaica, John Lynch; Agaasimaha Dalxiiska, Donovan White; Istaraatijiyad sare oo ka tirsan Wasaaradda Dalxiiska, Delano Seiveright iyo Agaasime Ku -xigeenka Dalxiiska Ameerika, Donnie Dawson. Ka -qaybgalka Expedia waa mid ka mid ah shirar taxane ah oo lala yeelanayo dhowr hoggaamiye warshadeed oo socdaal, oo ay ku jiraan Shirkadaha Duulimaadyada waaweyn, Khadka Dalxiiska iyo Maal -gashadayaasha, dhammaan suuqyada isha ugu weyn ee Jamaica, Mareykanka iyo Kanada. Tan waxaa loo sameeyaa si loo kordhiyo dadka imanaya usbuucyada iyo bilaha soo socda, iyo sidoo kale, si loo kobciyo maalgashi dheeraad ah oo lagu sameeyo waaxda dalxiiska ee maxalliga ah.
Expedia Inc. sidoo kale waa shirkadda saddexaad ee ugu safarada badan Mareykanka, iyo shirkadda afaraad ee ugu weyn safarada adduunka. Boggeeda internetka, oo ah kuwa ugu horreeya isku -duwayaasha safarka safarka iyo mashiinnada metasearch -ka socdaalka, waxaa ka mid ah Expedia.com, Vrbo (horaantii HomeAway), Hotels.com, Hotwire.com, Orbitz, Travelocity, trivago iyo CarRentals.com.